Fizaran-doka no manamarika ny andron’ny vehivavy erantany ao Ganà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2011 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, srpski, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Isan-taona manerana izao tontolo izao no ankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny 8 martsa. Hetsika an-jatony no hita tsy tamin'io andro io ihany fa nandritra ny volana martsa mba hanamarihana ny zavabitan'ny vehivavy teo amin'ny sehatra ara-toe-karena, politika ary sosialy.
Tsy namela io andro io handalo fotsiny i Ganà sy ny vehivavy ao aminy . Maro ny hetsikanandeha ka nitarika ireo bilaogera sy ny fiarahamonim-pirenena ao Ganà hamosaka ny heviny/ny tsikera ato amin'ny aterineto.
Ny lohahevitry ny amboara dia “Omena fahefana ny vehivavy Ganiàna mba ho fampandrosoana ny firenena ”. Ny handrisika ny vehivavy Ganiàna no tanjon'ny fifaninanana mba hikatsaka ny tsara indrindra amin'ireo karazana lalam-piainana ary handray ny toerana sahaza azy eo amin'ny fizotry ny fampandrosoana ny firenana. Ny sori-dalana dia anisan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary ny lanonana voalohany nanolorana ny amboara dia natao tao amin'ny Ivo toeram-pivoriana iraisam-pirenena ao Accra ny 8 Martsa 2011.
Ato-Ulzen Appiah, mpanoratra ny “The Vim Views & Versions – Blogs of a MIghTy African” bilaogy nosoratany amin'ny atsipirihany momba ny lanonana izay nahita an'i Dorothy Gordon, talen'ny ivotoeran'ny fahatsarana indrindra momba ny TIC Ghana-India Kofi Annan nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny asany momba ny fampandrosoana ny TIC ao Ganà.
Nanadihady an'i Farida Bedwei i Edward Amartey-Tagoe , mpanoratra ny ” “Ny famaritana ny atao hoe fahagagana ” toy ny lahatsoratra Fanampiana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy:
Nahazo ny vokatry ny fitiliana nataon'ny dokotera momba ny paralysie cerebral (fahalemen'ny atidoha) i Farida ary ao amin'ny fiarahamonina mihevitra ny tratran'io aretina io ho avela sy ijerena azy ireo ho tsy mahavita zavatra ho an'ny mpiara-belona aminy; no nanapahan'i Edward hevitra hanasongadina azy amin'ny alalan'ny fikaroham-balinteny avy amin'ny fanontanian-drazazavavy sasany
Dorothy K Gordon, izay olona tokana nahazo fankasitrahana eo amin'ny sehatry ny ICT. Tsy mora ny nampamirapiratra ny lalampiaina-nodiavina. Miarahaba. #Internationalwomensday @nnenna
RT @nnenna: Ramatoa Affei-Dadzie no Filoha vehivavy voalohany tao amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety Ganà#Internationalwomensday @ArriannaMarie
Mihorakoraha ho an'ireo vehivavy mendrika sy mahagaga izay tsy eto! nahatratra ny fetin'ny vehivavy! #internationalwomensday @Xhumonne
54% ny parlemantera Roandà dia vehivavy!!! dingana manaraka ny filoham-pirenena! Omeo hery ny vehivavy, omeo hery ny firenena! #internationalwomensday #iwd tao amin'ny @BeautyOfRwanda
Vehivavy Ganiana voalohany nosokajiana ho Mpandrindra an-kajimirindra (Programmeur à l'informatique). Namorona ny Camelot. Elizabeth Joyce Villars #Ghana #internationalwomensday tao amin'ny @nnenna